Serasera an-dranomasina Hohatsaraina mba ho lavitry ny loza
Tsy maintsy manaraka ny fivoaran’ny teknolojia mifamatotra amin’ny tontolon’ny ranomasina i Madagasikara. Antony ny nizarana ireo manampahaizana manokana ny fahaiza-manao ho an’ ireo Malagasy miasa sy misehatra eny amin’ny ranomasina eo anivon’ny APMF eto Madagasikara.
Efa nisy hatrany moa ny fampiofanana ireo teknisianina miserasera amin’ireny ivontoerana mampifandrindra ny fitadiavana sy ny famonjena aina eny an-dranomasina ireny. Mbola nohamafisina izany tamin’ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny Hotely Colbert Ananinarenina. Noho ny fandrosoan’ny teknolojia dia afaka mampiasa ny vaovao rehetra ahafahana misoroka ny loza ny teknisianina ary mandrakitra ny antontan-kevitra sy ireo tarehimarika manodidina ny tontolon’ny ranomasina ahafahana manampy ny sambo mivezivezy sy mifamoivoy. Nisy ny fijeren’ireo mpampiofana ny tranga nisy teto Madagasikara ka hanaovaozan’izy ireo tatitra hijerena ny zavatra tokony hohatsaraina sy hifampizarana traikefa. Tamin’izany tatitra izany dia efa nanambara ireo mpampiofana sy mpanao fanadihadiana fa afa-po tamin’ireo seranan-tsambo 8 nohadihadiana.